Prof Jawaari oo Jeebka u Galay Damul Jadiid, Madaxweynahana Weydiistay Inuu Baarlamaanka Hor Yimaado “Si uu Uga Warbixiyo Cida Ka Talisa Kismaayo” | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Prof Jawaari oo Jeebka u Galay Damul Jadiid, Madaxweynahana Weydiistay Inuu Baarlamaanka Hor Yimaado “Si uu Uga Warbixiyo Cida Ka Talisa Kismaayo”
Muqdisho (RBC) Isqabqabsiga u dhaxeeya Xulufada Madaxweyne Xassan iyo madaxda ciidamada deegaanka ee Raaskaambooni ayaa maalinba maalinta ka danbeysa sii xoogeysanaya, iyada oo hada dad badan oo indheer garad ah ay ku micneeyeen in dowlada xassan ay ku fududaaneyso arimaha jubooyinka oo ay arinka u wajaheyso qaab qabyaaladeysan.
Muranka u dhexeeye labada qeybood ayaa hada ku soo biiray Jawaari oo hada u muuqda mid aan ka dhexdhexaad aheyn kadib markii uu si hordhac ah baarlamaanka uga waramay kulanka berito la isu diyaarinayo ee lagu wado in xukuumadda cusub kalsoonida ku weydiisato baarlamaanka, ayaa sheegay in dawlada looga baahan yahay inay ilaaliso qaranimada wadanka.
Prof Jawaari isaga oo si dadban u taageeraya xulufada Madaxweyne Xasan ayaa waxa uu yiri “Waa waajib in wixii dhaawacaya qaranimada iyo madax bannaanida laga hortago oo la difaaco qaranimada Soomaaliyeed…”
Yaa dalka laga daafacayaa?
Ereygaan ee u adeegsaday Afhayeenka baarlamaanka Fedraalka Soomaaliya Prof Jawaari ayaa ah mid aan loo baahneyn maadaama Raaskaambooni ay dadka deegaanka ay sameysteen oo sahlay in laga saaro Al Shabaab.
Ciidamada Kenya ee ku sugan Jubooyinka ayaa waxa ay kamid yihiin Ciidamada AMISOM, sidoo kale Ciidamada dalalka Ugandha , Jabuuti, Itoobiya iyo kuwo oo kale oo badan baa ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Dr Maxamed Gacmadheere oo ku sugan gudaha Magaalada Kismaayo ayaa waxa prof jawaari ku edeeyey mid uu dabka sii hurinayo waxaana laga filayey in uu ka fiirsado erayada uu isticmaalayo.
“Qofka haduu masuuliyada Somaliyeed oo weyn qaaday sida tan Jawaari loo igmaday waa in uu shacabka isku mid ugu adeegaa oo uu isqabqabsi ku saleysan qabiil iyo qurun kale uusan dhex galin.” ayuu yir Dr Gacmadheere
Kismaayo yaa ka taliya?
Prof Jawaari oo ka hadlay wararka sheegaya in wafdi dawladu u dirtay magaalada Kismaayo ay soo celiyeen ururka Raskambooni ee dadka deegaanka uuna hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe ayaa wuxuu sheegay in baarlamaanka uu ka rabo madaxweynaha dawlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu baarlamaanka hor yimaado si loo weydiiyo xaalada Kismaayo iyo wafdiga laga soo celiyey halkaasi maalintii Arbacadii. [HALKAN KA AKHRI XUBNAHA WAFDIGA IYO UJEEDADIISA]
“Arinta Kismaayo waxaana magaca baarlamaanka ku weydiisanayaa madaxweynaha inuu baarlamaanka yimaado oo nooga warbixiyo bal sida dhacadadaasi [soo celinta wafdiga] ay u dhacday..” ayuu sii raaciyey afhayeenka baarlamaanka.
Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya oo Moment Media Group maanta la hadashay ayaa sheegay inay aad uga niyad jabsan yihiin wararka sheegaya in ciidamada Kenya aysan ka amar qaadin taliska AMISOM halka ciidamada Raskambooni ay hadda u muuqdaan maleeshiyo aan ku hoos jirin taliska dawlada Muqdisho, taasina ay dhibaato ku tahay sugida amaanka dalka. [DAAWO SAWIRO CIIDAMADA RASKAMBOONI]
“.. Waad la socotay in Arbacadii markii wafdigii uu madaxweynuhu diray la soo ceyriyey inuu madaxweynuhu u yeeray taliyaha guud ee AMISOM uuna weydiiyey in taliyaha ciidamada Kenya ee jooga Kismaayo uu tafaasiil ka bixiyo sababta ishortaaga loogu sameeyay wafdiga, taliyuhuna waxaa uu cadeeyay in ciidamada Kenya ee meesha [Kismaayo] jooga aaney amar ka qaadanin” sidaasi waxaa Moment Media Group maanta u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada oo aan rabin in warbixintan magaciisa loo adeegsado.
..”Markaa hadda waxay arimuhu taagan yihiin horta yaa Kismaayo ka taliya? ma dawladaa ka talisa mise Kenyanka iyo maleeshiyada Raskambooni illeen anagu ciidan dawladeed meesha kuma ogine..” ayuu sii raaciyey xildhibaanka hadalkiisa.
Dhanka kale Xildhibaanada taageersan fikirka ah in daka deegaanka ah ay u taal maamul u sameynta Jubooyinka ayaa Moment Media Group u sheegay in uu maaxweynaha uu wato arimo ka baxsan wixii loo doortay oo dalka ku celinayao waqtiyadii qabaliga aheyd.
“Madaxweynuhu aad baan uga niyad jabsan nahay in u ku dhaqmo qaab qabqable isaga oo si bareer ah ugu xadgudbayoi dastuurka dalka u yaal” ayuu yiri mid kamid ah Xildhibaanada DF ka
Codsiga gudoomiyaha baarlamaanka uu ugu yeeray madaxweynaha inuu hor yimaado baarlamaanka ayaa ah markii ugu horeysay oo baarlamaankan uu ka hadlo arimaha gobolada Jubbooyinka oo waayadan dambe ay xiisad weyn ka aloosan tahay gaar ahaan dawlada iyo ururka Raskambooni oo u muuqda inay isku khilaafsan yihiin arimo badan oo gobolkaasi ka jira.
Mudanayaasha baarlamaanka laftooda ayaa ku kala aragti duwan sida loo wajahayo arimaha Kismaayo.
Dhoofka dhuxusha muxuu baarlamaanka ka qabaa?
Gudoomiyaha baarlamaanka oo sidoo kale ka hadlay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya guud ahaan ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in dhuxul aad u fara badan ay hadda ka dhoofeyso dekedaha Kismaayo iyo Baraawe isagoo dawladana ugu baaqay inay soo cadeyso tallaabada ay ka qaadeyso dhirta loo bedelayo dhuxusha ee dibadda loo iibgeynayo iyo dadka ku lugta leh.
“Dhuxusha iyo dhirta in la jaro oo la dhoofiyo waa mamnuuc, waxaa jira sharciyo fara badan oo laga soo bilaabo illaa 1965-kii soo jiray oo diidaya dhuxusha laga gooyo geedaha iyo xaalufka deegaanka, marka xukuumada waa inay noo keento barnaamij ay arintaasi wax kaga qabaneyso”, ayuu yiri afhayeenka oosidoo kale ku daray in Qaramada Midoobay ay xayiraad illaa hadda ku heyso dhoofinta dhuxusha.
Madaxtooyada oo dacwad u gudbisay Midowga Afrika
Dhanka kale, ilo wareed ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa Moment Media Group u xaqiijiyey in madaxweyne Xasan Sheekh uu ashtako rasmi ah u diray sarkaalka ugu sareeya Midowga Afrika Aboubacar Diyara isagoo weydiistay in Midowga Afrika uu jawaab ka soo bixiyo awooda ciidanka Kenya iyo cida ay kaga amarqaataan hawlgalka Soomaaliya. Mr Diyara oo isaga laftiisa bisha Febraayo ee soo socota ay kaga eg tahay xilka uu ka hayo xafiiska Midowga Afrika, ayaa laga filayaa inuu Muqdisho soo gaaro usbuuca berito bilaabanaya uuna la kulmo madaxweynaha.
Xulufada Xasan SH waxay ku eedeysay ciidamada Kenya inay arimaha gobolada Jubbooyinka kala xiriiraan cid aan dawlada ka amarqaadanin isla markaana Kismaayo ay ka dhigayaan meel ay jabhado ka taliyaan.
Ashtakada madaxweynaha ayaa timid kadib markii gelinkii dambe e Arbacadii uu madaxweynuhu la kulmay taliyaha guud ee ciisamada AMISOM Jen Andrew Gutti oo laftiisa ka cawday hab dhaqanka ciidanka Kenya ee jooga Kismaayo. Kulankaasi waxaa laga soo wariyey saraakiisha Villa Soomaaliya inaanu wax natiijo ah keenin.
Dasturka Dowlada Fedraalka ayaa qaba in maamul u sameynta gobolada Dalka ay u taal dadka deegaanka.
Safaarada Soomaalida ee Kenya oo Passaboorka u diidey OGAADEENKA How exchange rate movements affect a nation’s trading relationships with other nations